Anyị na-ahọrọ ọzọ mgbanwe ná ndụ anyị imeri-agbụ agbụ agwa. N'ụzọ dị otú a, anyị na-achọ ndị ọzọ gburugburu, na agba, Ngwa, akwụkwọ ahụ aja, skins maka anyị kasị-eji OS, ngwa, na multimedia ngwaọrụ. Ebe a, anyị na-aga na-egosi gị otú ị pụrụ mfe ịgbanwe akpụkpọ gị n'anya ma na-kasị eji media apps VLC na ebe i nwere ike inwe ha. Isiokwu a nwere ike inyere gị site agbakwunye ụfọdụ ihe na agba na nkecha anya gị uto. n
Nzọụkwụ 1: Get a Custom VLC Skin si Internet
Ị nwere ike nweta otu njuaka weebụsaịtị ebe ị nwere ike ibudata omenala skins. E nwere nza nke ndị si n'ebe ndị na-eji VLC skins. na ị pụrụ ịgbaso n'okpuru aro maka nbudata ọzọ VLC skins. Otú ọ dị, ị nwere ike nweta ukara VLC skins mfe site ebe a ka e gwara ebe a. VLC skins bụ adịghị n'ihi Mac OS.
Nzọụkwụ 2: Download a Skin Gị PC
Ugbu a, i nwere ike ibudata gị họọrọ omenala VLC anụ si n'elu website na-azọpụta ya na kọmputa gị na mmasị gị. Iji nweta a zuru ezu dị ọcha na mma-emesi obi ike nke ịzọpụta VLC akpụkpọ faịlụ, biko ibudata ya si n'elu ukara VLC website.
Ị nwere ike nweta faịlụ gị ọnọdụ echekwara na kọmputa gị, na ọ ga-abụ na (.vlt) faịlụ ndọtị. Ugbu a n'okpuru usoro ga-eduga gị ịgbanwe akpụkpọ gị VLC ọkpụkpọ.
Nzọụkwụ 3: Inweta NchNhr Bar nke VLC Player
Mepee VLC Player na elu nke window, ị pụrụ ịchọta menu mmanya maka VLC Player. Nke a menu mmanya ga-enyere gị si ịgbanwe skins site n'okpuru nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 4: Gaa "Mmasị" site "Ngwaọrụ" NchNhr Bar
Site menu mmanya nke VLC Player, họrọ "Ngwaọrụ" menu, na i nwere ike inwe ụfọdụ toggle menu na-ahọpụta. Ebe a, ị ga-aga na ala menu "Mmasị" na ọ ga-eduga gị ka i nwee akpụkpọ menu. Nke a menu bụ ntọala menu maka VLC Player.
Ugbu a pịa na "Mmasị" menu na-windows dị ka n'okpuru otu. The "Interface Ntọala" bụ maka ị na-ahọrọ na omenala ma ndabere akpụkpọ.
Chọta "Lee ma na-eche" nhọrọ si "Interface Ntọala" na mgbe ị nwere ike nweta anụ mmasị nhọrọ. Ịgbanwe a omenala akpụkpọ, i kwesịrị ego "Iji Custom Skin".
Jiri ala ịke - Ọ ga-ekwe ka ị na-ndabere akpụkpọ maka VLC Player.
Jiri Custom Skin - Ọ ga-ekwe ka ị họrọ a omenala ma ọ bụ ebudatara akpụkpọ gị VLC Player.
Nzọụkwụ 5: Mepee ebudatara Skin si VLC Player
Ị nwere ike ugbu nanị tinye na anụ na ị ebudatara na mbụ na-azọpụta na kọmputa gị. Pịa na "ịchọgharị" igbe na ọ ga-gbapụta kọmputa window na-faịlụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye. Chọpụta faịlụ na kọmputa gị ma họrọ faịlụ nke (.vlt) faịlụ ndọtị. Ugbu a Pịa na "Open" igbe dị na ala nke window ka ịgbakwunye faịlụ ịhọrọ maka anụahụ.
Mgbe agbakwunye faịlụ gị omenala akpụkpọ isi iyi faịlụ, i nwere ike ịzọpụta akpụkpọ faịlụ maka na-anụ faịlụ gbanwere maka VLC Player. Nke a bụ nke ikpeazụ nzọụkwụ maka na-agbanwe agbanwe na akpụkpọ gị VLC Player.
Nzọụkwụ 6: Malitegharịa ekwentị VLC Player / Play a Video na VLC Player
Mgbe oge ọzọ ị ga-emeghe VLC Player ma ọ bụ na-egwu a media faịlụ site VLC Player, i nwere ike na Skin maka VLC Player. Ya mere, na-enwe omenala VLC skins na kọmputa gị. Ụfọdụ njikọ na-nyere n'okpuru iji nweta ihe VLC Skins. Soro n'elu ntụziaka na-egwu mmasị media faịlụ na gị họọrọ VLC akpụkpọ.
E nwere ụfọdụ weebụsaịtị ebe ị nwere ike ibudata gị mma VLC Skins. Ị nwere ike mfe ego maka VLC website ibudata dị iche iche skins n'ihi na gị VLC na Windows na Linux PC. Ụfọdụ njikọ na-nyere n'okpuru ibudata ọzọ VLC Skins.
Olee otú Play na tọghata AVCHD Files na VLC
Olee otú iji tọghata VLC faịlụ ka MP3
Olee otú iji tọghata VLC faịlụ ka MP4 Files
Olee otú mmiri iyi VLC ka TV?
Olee otú ime ka VLC ndabara ọkpụkpọ
7 VLC iwu edoghi mkpa ka ị mara
Olee otú Play M4V Files na a VLC Media Player?
Olee otú Play M2TS Files na a VLC Media Player?
> Resource> VLC> otú ịgbanwe VLC Skin